အီတလီမှာ Apple အတွက်ဒဏ်ငွေ | ငါက Mac ကပါ
အီတလီမှာရှိတဲ့ Apple အတွက်ဒဏ်ငွေအသစ်၊ Cupertino ကလူတွေအတွက်ဒဏ်ငွေအသစ်
ဒါဟာ Apple ကသူ့ရဲ့ဥရောပထုတ်ကုန်အပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌၎င်း၏ထုတ်ကုန်အပေါ်ကမ်းလှမ်းသောအာမခံမူဝါဒများတည်ထောင်လိုသောများအတွက်အလှနျပေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပုံရသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Apple ရဲ့ထုတ်ကုန်သောဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့တွင်ဥရောပ၌တစ်နှစ်အာမခံချက်ရှိသည်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးအက်ပဲလ်ကိုနှစ်နှစ်လိုက်နာရမည်။
ထို့ကြောင့်ထုတ်ကုန်ကမ်းလှမ်း၏နည်းလမ်းကိုခေါ် ဥရောပ၌ AppleCareအထူးသဖြင့်အီတလီနိုင်ငံတွင်ဒဏ်ငွေယူရို ၉၀၀,၀၀၀ ဖြင့်ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ AppleCare ထုတ်ကုန်ကမပေးနိုင်ဘူး ဥရောပရှိ Cupertino မှတာဝန်ရှိသူများသည်အနည်းဆုံး ၂ ခုပေးရန်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်နှစ်အာမခံချက်မှနောက်ထပ်နှစ်များသို့သွားပါ။
ဒီအခြေအနေကိုပြိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးတရားရုံးကအီတလီမှာရှုတ်ချခဲ့ပြီးယခုအခါအီတလီကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ရောက်ရှိလာသောအခါ Apple ကဒဏ်ငွေယူရို ၉၀၀၀၀၀ ဖြင့်တုန့်ပြန်ရမည်။
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် Apple ဟာသူတို့ရဲ့ AppleCare ထုတ်ကုန်ကိုရောင်းဖို့ကြော်ငြာတွေကိုလှည့်စားမပေးရဘူး၊ ဝယ်သူကကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခု ၀ ယ်တာနဲ့အခမဲ့နှစ်နှစ်အာမခံကိုခံယူခွင့်ရှိတယ်။ ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်ရန်လိုသော Applecare ကိုဝယ်ယူလျှင်၎င်းကိုနှစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို Apple ကတစ်နည်းနည်းနဲ့အသနားခံမလားဆိုတာကြည့်ရလိမ့်မယ်။ ရှင်းနေသည်မှာဥရောပရှိ Apple ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည် ၎င်းတို့တွင်နှစ်နှစ်အာမခံရှိပြီးသုံးစွဲသူများကိုသက်တမ်းတိုးပြီးဖြစ်သည်။ Apple ကိုယ်တိုင်က၎င်းကိုလိုက်နာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » အီတလီမှာရှိတဲ့ Apple အတွက်ဒဏ်ငွေအသစ်၊ Cupertino ကလူတွေအတွက်ဒဏ်ငွေအသစ်
Josefrikardo (@Josefrikardo) ဟုသူကပြောသည်
ဤဆောင်းပါး၌သင်ပြောပါက -“ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို Apple ကတစ်နည်းနည်းနဲ့အသနားခံလားဆိုတာငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။ ရှင်းပါတယ်။ ဥရောပမှာရှိတဲ့အက်ပဲလ်ထုတ်ကုန်တွေဟာနှစ်နှစ်အာမခံချက်ရှိပြီးသုံးစွဲသူများကိုသက်တမ်းတိုးလိုက်ပြီ။
ဥရောပ၌, နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူအတွက်နှစ်နှစ်အာမခံရှိသည်, ဟုတ်တယ်, ဒါပေမယ့်ဒုတိယနှစ်ကဝယ်ယူရှိရာတည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်စားသည်။ အကယ်၍ ငါ့ကို Corte Inglés (သို့) FNAC တစ်ခုပြောရင်သူတို့ကသဘောတူညီချက်တွေရကြလိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်တခြားအရာတွေမှာအနိုင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့စတိုးဆိုင်တွေကအက်ပဲကိုမရောင်းကြဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များစျေးနှုန်းများအမြဲတမ်းတူညီကြသည်) နှင့်, top ထို၏ထိပ်တွင်, သင်သည်ထိုသူတို့တစ်နှစ်အာမခံပေးဖို့ရှိသည်? ... မဖြစ်နိုင်ဘူး!
ကျွန်ုပ်သည် Apple သုံးစွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ သို့သော်သူတို့သည်“ တရားဝင်” ပြီး“ မှန်ကန်” သောကြောင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုမရကြပါ။ ဥရောပ၌ စတင်၍ သူတို့သည်အခွန်တစ်ခွက်ကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုစုဆောင်းရန်အိုင်ယာလန်တွင်၎င်းတို့၏ဌာနချုပ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး iPhone နှင့် facetime စတင်ချိန်တွင်၎င်းကိုဖွင့်ရန် (သို့) ရပ်တန့်ရန်အိုင်ယာလန်သို့ယူရို ၁.၂၅ (သို့) ဒေါ်လာဖြင့် SMS စာတိုတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်€ခန့်ပေးရသည်။ ၆ ။ သူတို့ပေးတာဘာမှမရှိဘူး။
အက်ပဲလ်လို-ရာမကော်ပိုရေးရှင်းကြီးကိုဒဏ်ငွေယူရို ၉၀၀၀၀၀ ကိုဒဏ်ငွေချမှတ်ခြင်းဟာ Amancio Ortega ကိုသင့်ကိုရေခဲမုန့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ယူရို ၁၀၀၀ တောင်းခံတာနဲ့တူတယ်။ ၎င်းသည်သူ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သော်လည်းသူ၌ငွေများစွာရှိပြီးသူပင်မသိနိုင်ပါ။
Josefrikardo သို့ပြန်သွားရန် (@Josefrikardo)
OS X Eagle Peak?, လာမည့် Mac OS အမည်နှင့်ပတ်သက်သောကောလာဟလထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်
ဤရွေ့ကားသင် Apple Watch များအတွက်အားသာချက်ယူနိုငျသောကမ်းလှမ်းမှုများဖြစ်ကြသည်